यी युवती, जसले कमाउँछिन् घण्टाकै १२ लाख ! | Dinesh Khabar
यी युवती, जसले कमाउँछिन् घण्टाकै १२ लाख !
२०७६ चैत्र ४, ०६:१६
एक युवतीले एक घण्टामै १२ लाख रुपैयाँ कमाउँदछिन् भन्दा तपाईलाई विश्वास नलाग्न सक्छ तर, बास्तविकता भने यस्तै रहेको छ।
अस्ट्रेलियामा बस्ने चेल्सी नामकी युवतीले निरन्तरको कडा परिश्रमका कारण स्मार्ट वर्क गर्दा सफल भइने कुरा साबित गरिदिएकी छन्। उनी कुनै जागिर खाँदिनन् तर एक घन्टामै १२ लाख रुपैयाँ कमाउँदछिन्। अन्तर्रा्ष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुका अनुसार, चेल्सी पहिला त कार्यालयमा काम गर्दथिन तर त्यो काम बाट दिक्क बनेपछि उनले अनलाइन भिडियो गेमबाट पैसा कमाउने दिमाग लगाइन्।
सोही अनुरुप उनले भिडियो गेम खेल्न थालेर राम्रो कमाउन थालिन्। उनी एक घन्टा भिडियो गेम खेलेको १२ लाख रुपैयाँ लिन्छिन्। चेल्सीले गेम खेल्दा मानिसहरू लाइभ हेर्दछन्। लाइभ स्ट्रीमिङका बेलामा सब्स्क्रिप्सन, विज्ञापन र स्पोन्सरशिपका कारण उनको कमाइ एक घन्टाको १२ लाख रुपैयाँ पुगेको हो। उनको इन्स्टाग्राममामात्र ४६ दशमलव ६ लाख फलोअर्स छन्।
उनलाई पार्टी गर्ने ठूलो शौख छ र आफ्ना तस्वीरहरू सामाजिक सञ्जालमा शेयर गरिरहन्छिन्। आफ्नो उमेरको हिसाबले उनी रमाइलो काम गरिरहेकी छन्। उनले फार्मेसीमा डिग्री लिएकी छन्। एजेन्सी
अन्य केही रोचक समाचार
२०७७ असार २७, ०७:२५
यो हो सुनले बनेको संसारकै पहिलो पाँचतारे होटल(फोटोसहित)
भियतनामको हानेईमा एउटा पाँचतारे होटल सुनै सुनले बनाइएको छ। यो पाँचतारे डोल्से हानेई गोल्डेन लेकको निर्माणमा १० करोड ६० लाख पाउन्ड अर्थात् नेपाली रुपैयाँ २३ अर्ब ८० करोड बढी खर्च भएको छ। … विस्तृतमा
२०७७ असार २५, ०५:५४
रक्सीको नशामा मात्तिएकी नर्सले हंगामा मच्चाएपछि...
एक नर्स यात्रीले भोड्का पिएपछि हवाई यात्राको समयमा हंगामा गरेकि छन्। टर्की जाने एक फ्लाइटमा चार घन्टासम्म उनले हंगामा गरेकी थिइन। … विस्तृतमा
२०७७ असार ६, ०१:५८
बिरामी छोरालाई जिउँदै बोरामा हालेर पुरेपछि...
एक बुवाले आफ्नो बिरामी छोरालाई जिउँदै बोरामा हालेर पुरेको घटना सार्वजनिक भएको छ। शुक्रबार रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका –४ प्रगतिनगरका ३६ वर्षीय राजु परियारलाई जिउँदै छोरालाई गाडेको आरोप लागेपछि … विस्तृतमा